Isahluko 88 | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
Abantu abakwazi nhlobo ukucabanga izinga isivinini Sami esisheshe ngalo: Kuyisimangaliso esenzekile esingaqondakali kumuntu. Kusuka ekudalweni komhlaba, isivinini Sami silokhu siqhubekele phambili, futhi umsebenzi Wami awukaze ume. Umhlaba wonke uyaguquka usuku ngosuku, ngokunjalo nabantu balokhu beguquka. Konke lokhu kuwumsebenzi Wami, konke kuwuhlelo Lwami, futhi ngaphezu kwalokho, ukuphatha Kwami, futhi akukho muntu owazi noma oqonda lezi zinto. Kulapho kuphela nginitshela Ngokwami, kuphela kulapho ngixoxa nani ubuso nobuso, lapho nazi khona okuncane; kungenjalo, akukho muntu nhlobo onombono wepulani yohlelo Lwami lokuphatha. Anjalo amandla Ami amakhulu, futhi nangaphezu kwalokho, zinjalo izenzo Zami ezimangalisayo. Lezi yizinto okungekho muntu ongaziguqula. Ngakho, engikushoyo kuyenzeka, futhi lokhu ngeke kuguquke nhlobo. Emibonweni yomuntu alukho noluncane ulwazi Ngami—konke kuyinkulumo engenamqondo! Ungacabangi ukuthi usuthole okwanele noma usuthi! Ngiyakutshela lokhu: iseyinde indlela okufanele uyihambe usazokuya kude! Kulo lonke uhlelo Lwami lokuphatha, nazi okuncane kuphela, ngakho kufanele nilalele lokho engikushoyo futhi nenze noma yikuphi enginitshela ukuthi nikwenze. Yenzani ngokwezifiso Zami kuzo zonke izinto, futhi nakanjani niyoba nezibusiso Zami; lowo okholwayo angemukela, kanti lowo ongakholwa uyothola “ize” abelicabanga ligcwaliswe kuye. Lokhu kungukulunga Kwami, futhi, nangaphezu kwalokho, kuwubukhosi, ulaka, nokusola Kwami. Ngeke ngiyeke noma ubani ukuthi aphunyule nanganoma yimuphi umqondo noma isenzo esisodwa.
Lapho bezwa amazwi Ami abantu abaningi bayesaba futhi baqhaqhazele, ubuso babo bube nokuhwaqabala kokukhathazeka. Ingabe ngikonile? Kungenzeka ukuthi awuyena omunye wezingane zikadrako omkhulu obomvu? Wenza sengathi ulungile! Futhi wenza sengathi uyindodana Yami eyizibulo! Ingabe ucabanga ukuthi ngiyimpumputhe? Ingabe ucabanga ukuthi angikwazi ukwahlukanisa phakathi kwabantu? NginguNkulunkulu ohlola ekujuleni kwezinhliziyo zabantu: Yilokhu engikutshela amadodana Ami, futhi yilokhu engikutshela nina, zingane zikadrako omkhulu obomvu. Ngibona konke ngokucacile, ngingenzi nephutha elincane. Kungenzeka kanjani ngingakwazi engikwenzayo? Ngicacelwe ngokuphelele ngakho! Kungani ngithi nginguNkulunkulu uqobo Lwakhe, uMdali wazo zonke izinto ezulwini nasemhlabeni? Kungani ngithi nginguNkulunkulu ohlola ekujuleni kwezinhliziyo zabantu? Ngazi kahle isimo sawo wonke umuntu. Nicabanga ukuthi angikwazi okufanele ngikwenze noma okufanele ngikusho? Lokhu akuyona inkinga yenu. Qaphelani ukuba ningabulawa yisandla Sami; ngaleyo ndlela niyolahlekelwa. Izinqumo Zami zokuphatha azithetheleli. Niyaqonda? Konke okungenhla kuyingxenye yezinqumo Zami zokuphatha. Kusuka ngosuku enginitshela ngalo, uma kukhona okunye ukona, kuyoba khona impindiselo, ngoba ngaphambili beningaqondi.
Okwedlule: Isahluko 87
Okulandelayo: Isahluko 89